करिना कपुरको घरमा कोरोना, हेर्नुहोस् कस कसलाई के भयो? – Online Sunapati
मुख्य पृष्ठ /News/करिना कपुरको घरमा कोरोना, हेर्नुहोस् कस कसलाई के भयो?
करिना कपुरको घरमा कोरोना, हेर्नुहोस् कस कसलाई के भयो?
मुम्बई । बलिउड अभिनेत्री करिना कपुरको घरमा पनि कोरोना पसेको छ । उनका पति सैफ अलि खानकी पहिलेकी पत्नीकी छोरी सारा अली खानले यो कुरा पुष्टी गरेकी हुन् । सारा अलि खान पनि अभिनेत्री हुन् ।
साराले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो घरमा कोरोना प्रवेश गरेको जानकारी दिएकी छन् । उनको ड्राइभरमा कोरोना पुष्टि भएको बताएकी हुन् ।
सारासँग उनका ड्राइभर गएका थिए या थिएनन् भन्ने अझै खुलेको छैन । यसअघि आमिर खान र बोनी कपूरका स्टाफ, कलाकार रेखाका सेक्युरिटी गार्डमा पनि कोरोना पोजेटिभ देखिएको थियो ।
भारत कोरोना भाइरसको संक्रमतिको संख्या ९ लाख नाघेको छ । गत २४ घण्टामा २८ हजार ४९८ नयाँ संक्रमित थपिएपछि कुल संक्रमितको संख्या ९ लाख ६ हजार ७५२ पुगेको केन्द्रिय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले मङ्गलबार बिहान जानकारी दिएको छ ।
पछिल्लो २४ घण्टामा भारतभरी कोरोनाभाइरसका कारण ५५३ जनाको निधन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । देशभरी कुल सक्रमितमध्ये तीन लाख ११ हजार ५६५ जना अहिले पनि संक्रमित अवस्थामै रहेका छन् । त्यसैगरी पाँच लाख ७१ हजार ४५९ जना कोरोनामुक्त भएका छन् भने २३ हजार ७२७ जनाको निधन भएको छ ।
भारतमा सब भन्दा बढी प्रभावित महाराष्ट्र राज्य रहेको छ । महाराष्ट्रमा मात्रै दुई लाख ६० हजार ४६१ जना संक्रमित भएका छन् भने दश हजार ४८२ जनाको निधन भएको छ । दोस्रो धेरै संक्रमित भएको तमिलनाडु राज्यमा एक लाख ४२ हजार ७९८ जना रहेका छन् भने २ हजार ३२ जनाको निधन भएको छ ।
तेस्रो धेरै संक्रमित भएको दिल्ली प्रदेशमा एक लाख १३ हजार ७४० जना रेहेका छन्् । दिल्लीमा कोरोना सं’क्रम’णको कारण ३ हजार ४११ जनाको मृ’त्यु भएको छ । कोरोना भाइरसको हिसाबबाट विश्वभरीको तथ्यांकलाई हेर्दा भारत तेस्रो धेरै संक्रमित रहेको देशमा पर्दछ पहिलो स्थानमा अमेरिका र दोस्रोमा ब्राजिलमा रहेका छन् ।
काठमाडौं प्रवेश गर्न नदिएको भन्दै प्रदेश १ मा कांग्रेसद्वारा संसद अवरुद्ध
काठमाडौं उपत्यकामा पुनः संक्रमित बढे, पछिल्लो २४ घण्टामा ४२ जनामा संक्रमण फेला
कोरोनाको त्रास बिच कैलालीमा सयौँ घर डुबानमा
आफूलाई ‘असजिलो भएको’ भन्दै बचाउ भनेर चिच्याएपछि लोकबहादुर अनिललाई बचाउन तालमै मिसिने खोलामा पसे, खोला सँगै उनी तालमा त पुगे तर अनिललाई भेट्टाउन सकेनन्, धेरैबेर लोकबहादुरले अनिललाई खोजे, तर, न लोकबहादुरले अनिलको उद्दार गर्न सके न आफू नै बाहिर आउन सके